I-EXCLUSIVE: IDrew Struzan's Jaw-Dropping MondoCon 2017 Yembula - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo I-EXCLUSIVE: I-Jrew-Dropping MondoCon 2017 kaDrew Struzan Iveza
I-EXCLUSIVE: I-Jrew-Dropping MondoCon 2017 kaDrew Struzan Iveza
by UTrey Hilburn III October 30, 2017
by UTrey Hilburn III October 30, 2017 1,199 ukubukwa
IMondoCon icishe yafika kithi. I-behemoth yomgubhi ophrintayo iyehla ngoNovemba 4 no-5 e-Austin, eTexas e-Austin American- Statesman futhi asikwazi ukulinda. Emasontweni ambalwa edlule, sithole ukuhleka kwezinye zezinto ezinhle eza nohlu lwabaculi olumangalisayo. Ukudalulwa ngakunye kuye kwamangalisa njengokugcina. Izikhwama zethu zemali sezivele ziyaqhaqhazela ngokwesaba inani lezinto esivele sidinga ukuzengeza emaqoqweni ethu.
Kulo nyaka, uDrew Struzan wodumo uzoba khona ohlwini olumnandi lwabaculi futhi asikwazi ukuzibamba, nina bafana. UStruzan ubhekele zonke izinhlobo zemifanekiso ehlonishwayo eminyakeni edlule, kusuka ku-Star Wars kuya e-Indiana Jones kuya ku-Blade Runner (ukubala abambalwa) lo mfana yinganekwane yokuhamba. Ukuhambela kwakhe iMondoCon yakulo nyaka kuqonde ngqo.
Besingeke sijabule kakhulu ukunikezwa ithuba lokuhlanganyela ngokukhethekile imibhalo emibili uStruzan azoletha nayo. Vele, zombili ziyamangaza futhi nina bafana nizofuna ukuba nabanikazi, siyakwenza. Ngokuzimisela, isilo sikaFrankenstein nomlobokazi wakhe abakaze babukeke kangcono.
IMondoCon ingumgubho wakho konke uMondo akuthandayo, kufaka phakathi ama-movie, ubuciko, amahlaya, umculo, amathoyizi nokudla. Yimpelasonto ekhethwe ngabalandeli emqondweni, equkethe abaculi nabadali abakholekayo abavela ezindaweni eziseduze umhlaba, amaphaneli, ukuhlolwa, amaloli okudla, amaphuzu abukhoma nemicimbi exhumanayo.
“IMondoCon ingumgubho wakho konke uMondo akuthandayo, kufaka phakathi ama-movie, ubuciko, amahlaya, umculo, amathoyizi, nokudla, futhi sijabule ngokwabelana nothando lwethu ngedolobha lase-Austin ngokubamba umhlangano maphakathi nedolobha e-Austin American-Statesman . ” Kusho iMenenja yeGalari Nemicimbi kusho uMondo, uDavid Rancatore. “Le ndawo ibijwayele ukuhlalisa imishini yokunyathelisa yaleli phephandaba futhi iyindawo enhle yabo bonke abaculi, ababonisi, ababekhona namaphaneli kule mpelasonto. Sijabule kakhulu ukusingatha ukuboniswa kwethu kusihlwa e-Alamo Drafthouse eSouth Lamar, ikhaya leMondo iminyaka eminingi, kanye nabalandeli bethu ukujabulela isipiliyoni esimangalisayo se-Drafthouse movie. ”
Ngemininingwane engaphezulu kuzo zonke izinto iMondo neMondoCon, bekela phambili ku-mondotees.com. Sizobona lapho, bantu!
UFrankenstein nguDrew UStruzan
I-18 ″ x24 ″
Iphrintiwe yi-DL Screenprinting
Umakoti kaFrankenstein nguDrew UStruzan